जब दिदीबहिनी दाजुभाइ बनेर घर फर्किए… – E Kutumba
By ईकुटुम्ब On Nov 7, 2020 0
‘इस्लामादबाट केटा बनेर गुजरात पुगेको छु । यस कुराले मलाई यति धेरै खुसी छ, म बयान गर्न सक्दिनँ । मलाई सानैदेखि केटीको लुगा मनपर्दैन थियो । मेरो काम र बानी केटाजस्तै थियो । मेरा सात बहिनी दुई जना भाइ पाएर निकै खुसी छन् । मेरो भाइ मुराद पनि खुसी छ ।’ यो भनाइ पञ्जाब प्रान्तमा गुजराज जिल्लाको सोनबडी गाउँको द्वितीय वर्षका छात्र वलीद आबिदको हो । लिङ्ग परिवर्तन अघि उनको नाम बशरा आबिद थियो । उनको सानो भाइ मुराद आबिद, जो नौ कक्षाको छात्र हो, अपरेशन अघि वाफिया आबिद थियो ।वलीद र मुरादका आमाबाबुको विवाह सन् १९९३ मा भएको थियो । त्यसपछि उनीहरुकोमा एकपछि अर्को ९ जना छोरीहरुको जन्म भयो । यद्यपि, अहिले दुई जना छोरीहरुले लिङ्ग परिवर्तन गरेपछि उनका सात छोरी र दुई छोरा भएका छन् ।
दुवै दिदीबहिनीको लिङ्ग परिवर्तनको अपरेशन इस्लामाबादस्थित पाकिस्तान इन्सटिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सेजको चिल्ड्रेन अस्पतालमा डा. अमजद चौधरीको नेतृत्वमा १२ जना डाक्टरहरुको टोलीले गरेको थियो । बीबीसीसँग कुरा गर्दै डा. चौधरीले यसअघि पनि उनले थुप्रैको लिङ्ग परिवर्तनको अपरेशन गरेको तर यो मामिला अन्यभन्दा फरक रहेको जिकिर गरे । दुई जनाले पछिल्लो दुई वर्षदेखि त्यहाँ उपचार गरिरहेका थिए । उनका अनुसार एकैपटक दिदीबहिनी वा दाजुभाइको त्यहाँ कहिल्यै पनि अपरेशन गरिएको थिएन ।
‘चौधरी भन्छन्, ‘हामीले दुई जनाको अलग–अलग अपरेशन गरेका हौँ । वलीदको अपरेशन २० सेप्टेम्बरमा गरिएको थियो । उनलाई त्यसपछि आइसीयूमा राखियो । जब अपरेशन सफल भएको सुनिश्चित भयो । त्यसपछि हामीले १० अक्टुबरमा मुरादको अपरेशन गरेका थियौँ ।’ उनका अनुसरा यो अपरेशन ६ घण्टामा चलेको थियो जसमा समय–समयमा कयौँ डाक्टर सामेल भएका थिए । दुई भाई २१ अक्टुबरमा घर फकिएका थिए ।
हरियो रङ्गको कुकुर
यस कारण पारिजातको फुल सुर्यको किरण पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडी भुईमा झर्छ